Etu esi ewepụta saịtị WordPress nke kachasị maka ọchụchọ | Martech Zone
As WordPress na-aga n'ihu ijide azụmaahịa azụmaahịa, anyị na-aga n'ihu na-enweta ọtụtụ arịrịọ ndị ọzọ sitere na nnukwu ụlọ ọrụ ndị nwere saịtị mara mma nke ụlọ ọrụ na-emepụta ịtụnanya na ụlọ ọrụ eserese eserese - mana enweghị njikarịcha dị mkpa iji metụta nsonaazụ ọchụchọ ha. Tupu anyị arụ ọrụ na atụmatụ dị iche iche maka ndị ahịa anyị, anyị na-amalite site n'inyere ha aka na njikarịcha. Enweghi oke ojiji maka itinye ego na ọdịnaya kachasị ma ọ bụrụ na ahụghị saịtị gị!
WP Shrug, a WordPress nkwado ọrụ ụlọ ọrụ, tinye ọnụ a pụtara ike ịgwụcha agwụcha ndepụta ma bipụtara ya na nke a dị mfe ọgụgụ ọgụgụ. Anyị enyerela ọtụtụ narị ụlọ ọrụ aka na njikarịcha WordPress ka m wee ghara 100% ere na ndepụta ha (ihe ndị dị n'okpuru), mana enwere m obi ike na ịgbaso ozi akwụkwọ ozi a ga-eme ka ị nweta 99% nke ụzọ ebe ahụ!
Ikwesiri guzobe weebụsaịtị gi na ezi ntọala. Nwere ike inye onwe gị isi mmalite site na itinye ihe ntinye 10 kacha elu maka ntinye SEO kacha mma.
Etu esi eweputa saiti WordPress ohuru
Nchịkọta weebụsaịtị - otu n’ime ihe kpatara ya anyị kwagara Flywheel ma hụ ya n'anya bụ ọsọ nke ndapụta ha na caching. Ewubere WordPress ụsụụ ndị agha kpọmkwem maka arụmọrụ WordPress ma ha agaghị eduhie gị na nkwado dịka ndị ọbịa na-eme.
CDN - Ọ bụrụ na onye na-elekọta gị anaghị enye netwọk nnyefe ọdịnaya, na-agbakwunye otu kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa. CDNs ga - enyere aka na ngwa websaịtị gị ga - ebu ngwa ngwa were ohere nke teknụzụ ihe nchọgharị na netwọkụ jikọtara ọnụ iji mee ngwa ngwa saịtị gị.
SEO Enyi na Enyi - Peeji peeji na mmebe isiokwu dị oke nkpa mgbe ọ na-eweta iweta engines ọchụchọ na nnukwu peeji. Ndenye HTML5, nhazi peeji, igodo, na ihe ndị ọzọ niile na-emetụta oke isiokwu gị na-ebute ọdịnaya gị ụzọ iji chọọ crawlers wee jiri algorithms mee ihe.
Caching - Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-enye WordPress na-enye usoro mkpuchi siri ike. Ọ bụrụ na ịnweghị otu, ị nwere ike ịdebanye aha maka ngwa mgbakwunye caching na-akwado ma dị mfe, WP Kaiser.
Categories - Ooh, Adịghị m onye edemede nke edemede anaghị egosi. Ekwenyere m na edemede dị iche iche na-eweta ọkwa nke saịtị gị iji chọọ engines yana anyị nwere peeji nke nwere ọkwa dị elu na ibe dị iche iche agaghị enwe ohere. M na-emekará »‹ noindex mkpado peeji nke, ezie.
Tags - Anyị noindex na mkpado ma adịghị ebipụta a meta na mkpado mmewere na isiokwu anyị. Ma, anyị na-akpado ihe nzuzu na ọkwa ọ bụla anyị bipụtara! N'ihi gịnị? Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa anyị na-eji nyocha anyị n'ime iji chọta isiokwu - yana ịpịpụta isiokwu ndị ahụ nke ọma na-achọpụta na achọtara ha.
Permalinks - A kwesịrị ekwesị kachasị slug na permalink na otu isiokwu nwere ike ma hụ na ọhụhụ maka gị posts na peeji nke na search na weghara onye nyocha uche na a search engine results peeji nke. Anyị na-anwa idebe permalinks dị ka obere ka o kwere mee na post slug n'ime 1 ka 5 okwu, na-ewepụ okwu ọ bụla na-enweghị isi.
Nkwupụta Spam - Ọ bụ ezie na WordPress na-enye njikọ ndị na-enweghị isi, imeghe ihe a na-ebipụta na-enweghị nkwado ga-eme ka saịtị WordPress gị gaa na ụlọ ọrụ SPAM. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ha na-eme ka mkparịta ụka dị na saịtị gị dị ka ihe echepụtara… akwadola ha!
Aha na nkọwa Meta - Anyị na-arụsi ọrụ ike na aha anyị na nkọwa meta iji bulie ha maka ọchụchọ. Cheta, isi okwu gi bu ihe di egwu na peeji nke gi nkọwa nkọwa bụ arụmụka na-akpali akpali na ihe kpatara mmadụ ji chọọ pịa njikọ gị na nsonaazụ ọchụchọ engine. Kwesịrị ịrụ ọrụ siri ike na aha gị na nkọwa meta dịka ị na-eme na ọdịnaya gị!
XML Sitemaps - you nwetụla mgbe ị gbalịrị ịchọta ebe ọhụrụ na-enweghị ntụziaka? Ọfọn, XML Sitemap gị na-enye ntụzi aka iji chọọ engines na ebe ọdịnaya gị dị, otu ọ dịruru mkpa, na mgbe emesịrị emelitere ya. Saịtị ọ bụla ga-enwerịrị XML Sitemap! M ga-atụ aro ịmata nke gị Sitemap na gị robots.txt faịlụ.
Ọ bụrụ na m ga-gbanwee ndepụta ahụ, enwere m ike iwepu otu ụdị na ndụmọdụ mkpado ma gbakwunye ihe ndị a:
Nkwalite mmekọrịta - Ọnọdụ saịtị dabere na ewu ewu. Iji chọta, a ga-ejikọ gị na. Iji jikọọ, ị ga-akwalite. Ijikọta mbipụta na mmekọrịta mmadụ na ibe na mmekọrịta mmekọrịta dị oke mkpa iji hụ na ekekọrịta ma bulie ọdịnaya gị nke ọma na ịntanetị.
Webmasters - Launching ọ bụla WordPress saịtị na-enweghị ịdenye ya Webmasters na ịchọpụta gị XML Sitemap pụtara na ị na-adịghị hụ na gị na saịtị ahụ na aha. Webmasters ga-achọpụta nsogbu na saịtị gị nke na - egbochi gị ịnye ọkwa nke ọma. Dozie nsogbu ndị ahụ, ị ​​ga-enwekwa ọkwa!
Nzaghachi ekwenti - Ọkara nke ọchụchọ ọchụchọ niile dị ugbu a na Google hụrụ n’anya anabata web design. Na-enweghị a kachasị maka igwe eji arụ ọrụ, ị naghị ewepụta maka ọchụchọ!
Ngọnarị: Ana m eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: cachecachingnjikarịcha ụdịcdnikwu okwu spamnetwọk nnyefe ọdịnayaife efeẹkedori WordPress saịtịnkọwa nke metameta mkpadommeghachi omume ekwentipermalinkspost slugAseo enyi na enyiseo isiokwuaha ahaslugbọtịnụ ndị na-elekọta mmadụnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ ebipụtabọtịnụ ndị na-elekọta mmadụbọtịnụ ịkekọrịta ọhaspam kwurunjikarịcha mkpadonjikarịcha ahaebe nchekwa WordPressedemede edemedeakwụkwọ ntinye akwụkwọWordPress igba egbenjikarịcha ederedewordpress permalinksmkpado wordpressrp wpxml saịtị saịtịyoast seo
Jul 20, 2016 na 10: 38 AM
Daalụ maka isiokwu.
Enwere m ike ịgbakwunye smth?
CDN: Ana m eji cloidflare CDN - ọ bụ n'efu na ngwa ngwa. M ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike igosi nke ị ga-akwado.
Nchịkọta - m na-eji digitalocean - ezigbo nnabata, mana ịkwesịrị ịma ihe ọ bụ njikwa na otu esi arụ ọrụ. Ya bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-arụpụta ezigbo ihe.
XML sitemap - ee! ọ dị ezigbo mkpa stof. Enweghị m ike ịghọta ndị na-amaba ya. Nwere ike ịmekọrịta ihe ọjọọ, mana ọ bụrụ na saịtị XML gị dị mma - are nọ n'elu.
Kedu maka mkpado ederede? You na-eji ya? ma ọ bụrụ na peeji nke noindex, dị ka na mkpado peeji nke, ị nwere ike ikwu iji canonical na mkpado?
Jul 20, 2016 na 2:40 PM
Ndewo Kottok, anyị na-akwado mkpado canonical. Ekwenyere m na WordPress na-akwado ha ugbu a dịka akụkụ nke ikpo okwu, yabụ anaghị m eme ihe ọ bụla pụrụ iche. M na-agba ọsọ plugins SEO nke Yoast ma nwee ike gbanwee ha ma ọ dị mkpa.
Jul 29, 2016 na 2:00 PM
Nri, wordpress nkwado canonical tag na na plugins ugbu a ọ dị mfe karịa itinye ya 🙂 Na-amasị m plugins
Daalụ maka isiokwu gị!